कस्तो छ संसारकै ठूलो डाक्सिङ विमानस्थल? - Namaste Post
कस्तो छ संसारकै ठूलो डाक्सिङ विमानस्थल?
एजेन्सी २०७६, ९ आश्विन बिहीबार ११:५७ 0
बेइजिङ: चीनले साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू भएको ७० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा ११ अर्ब डलर खर्चेर बनाएको नयाँ डाक्सिङ विमानस्थल बुधबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले बुधबार डाक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्।
डाक्सिङ विमानस्थलबाट पहिलो उडान चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको ए३८० जहाजले ग्वाङजाउका लागि भरेको छ।
संसारकै ठूलो एकल टर्मिनल भवन भएको र ४७ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको उक्त डाक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले पाँच वर्षमा बनाइसकेको हो। डाक्सिङ विमानस्थलमा प्रतिघन्टा ३०० जहाजले उडान र अवतरण गर्न सक्छन् भने चिनियाँ नागरिक उड्ययन प्रशासनले विमानस्थलमा ६ लाखले रोजगारी पाउने अपेक्षा राखेको छ।
संसारकै व्यस्त विमानस्थल हुने विश्वास गरिएको यो विमानस्थलले सन् २०४० सम्म वार्षिक १० करोड यात्रुलाई सेवा लक्ष्य राखेको छ। सात वटा धावनमार्ग बनाउन सकिने विमानस्थलले सन् २०२५ सम्म वार्षिक ७ करोड यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने चिनियाँ अधिकारीहरूको विश्वास छ।
सेन्ट्रल बेइजिङबाट ४६ किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित यो विमानस्थलमा नेपालको हिमालय एयरलाइन्सले पनि उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
तस्विरहरु: चिनिया न्युज एजेन्सीहरु
Tags feature submain